Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana indray ny Napoleon Bonaparte | Jack Welch: mpitarika nateraky ny roa-miaina roa - Reincarnation fikarohana
Proposed by: Walter Semkiw, MD, 2004
From: Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana
Article by: Walter Semkiw, MD & Judith Shipstad
Nanolotra ny lalao reincarnation aho Napoleon ary Jack Welch tamin'ny 2004, izay nohamafisin'ny fanahy Ahtun Re, izay nampitaina tamin'ny alàlan'ny mpanelanelana Kevin Ryerson. Niara-niasa tamin'i Kevin sy Ahtun Re aho hatramin'ny 2001 ary Ahtun Re dia naneho ny fahaiza-manao manao famaritana ny fiainana taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Ireo tranga ireo dia tafiditra ao amin'ny bokiko Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana.
Mpanohana an'i ReincarnatoinResearch.com, Judith Shipstad, dia naneho fiahiana manokana an'i Napoleon | Ny tranga Welch, izay noho ny fanadihadiana lalindalina kokoa, dia avy amin'ny fiainany taloha izay niarahany tamin'i Napoleon, izay nanompoany ho mpitantana azy. Judith, araka ny fangatahako, dia nanoratra fanadihadiana fohy nampitaha an'i Napoleon sy Jack Welch. Ity fitantarana ity dia omena etsy ambany:
Fanitsiana ny fiainana taloha
"Eny, misy zavatra maromaro mifanitsy amin'i Jack Welch sy Napoleon. Napoleon dia sehatra miaramila sy fitantanana izay nampiofana ho mpanakanto ary tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny fanonganam-panjakana tsy nanan-tsiny. Diniho ireto teny manaraka ireto:
'Tany an-tsaha aho, dia nanana fitsarana an-tendrony mafy tamin'ny ankamaroan'ny mpiasa tao amin'ny foibe.'
'Tamin'izany andro izany dia nitora-bato grenady…'
'Izahay dia nilalao tahaka ny fiankinanay niankina tamin'io, nilentika anaty fefy ary nitifitra bala.'
'Nandefa hafatra mazava izany… Tsy hotifirina ireo Sergent raha toa ka mbola mitohy ny jeneraly sy ny kolonely toa tsy misy na inona na inona mitranga.'
Mahavariana fa tsy an'i Napoleon ireto teny etsy ambony ireto fa nalaina mivantana avy amin'ny tantaram-piainan'i Jack Welch. Malaza noho ny sarinteny miompana amin'ny tafika, ireo fanamarihana ireo dia natao momba ny asan'i Welch ao amin'ny General Electric.
Samy naneho fahaiza-mitantana, faharanitan-tsaina, angovo, fiheverana amin'ny antsipiriany, fahatokisana, fifaninanana ary fahaizana mitaona ny hafa izy roa lahy. Fony mbola tanora izy roa, dia samy nanamontsina noho izy 'teo amin'ny lafiny resy.'
Nikasa ny hitady an'i India avy any Angletera i Napoleon ary hijinja an'i Frantsa ny tombony azo amin'ny fahazoana azy. Ny fitsangatsanganana mankany Egypt dia nanomboka io tanjona io ihany, saingy io tanjona io dia tsy mbola fantatra. Welch kosa dia nilaza tamim-pireharehana fa teo ambany fitarihany dia nanangana fifandraisana be dia be niaraka tamin'i India i GE ary nahita an'i India ho loharanon'ny talenta manankarena izy. Mariho manokana ny sarin'i Welch any India, ary nitazona tamim-pitiavana ny diary nosoratan'ny loham-pianakaviana India, amin'ny maha mpiara-miasa Indiana malaza azy mitazona azy amin'ny resaka. Vola mitentina tapitrisa dolara io sary io –Nandresy an'i India tokoa i Napoleon tamin'ny farany!
Miavaka ihany koa ny sarin'i Welch avy amin'ny tantaram-piainany izay mampiseho azy any India mihaona amin'ny Mpanjakavavin'i Angletera. Angletera no fahavalon'i Frantsa hatrizay niainan'i Napoleon. Amin'ity hetsika mahaliana ity dia natolotra ny Mpanjakavavy ny fahavalon'i Angletera taloha, Napoleon, tamin'ny naha nofo azy taloha ho Welch. Aseho amin'ny mombamomba azy izy, ary na dia vitsy aza ny mpamaky no hahalala an'io, mahita ny mombamomba ny Bonaparte virtoaly izy ireo.
Samy manana renim-pianakaviana matanjaka izy ireo; Samy nanana vehivavy telo voalohany izy ireo teo amin'ny fiainany. Napoleon dia nanana fanambadiana roa sy tompom-barotra lehibe, raha nanan-janaka telo i Welch.
Ny roa lahy dia somary fohy kely ny halehiben'izy ireo ary nanana legioma maranitra. Toy izany koa ny lohany. Napoleon dia nandefa sarimiaina antsoina hoe whist; Nandritra ny zandriny, i Welch dia nilalao kanasta niaraka tamin'ny reniny.
Ny feon'i Napoleon miteny dia nofaritana ho tsy lalina, fa modely tsara. Tsy lalina ny feon'i Welch, ary raha ny modely voalamina tsara dia tsy azoko antoka – Ny horonantsary YouTube dia manambara fa amin'ny fahanterany dia somary goaka ny feony, toa hoe nifoka sigara be loatra izy. Raha mpifoka sigara i Welch, dia hifanaraka amin'ny fomban'ny snuff fanta-daza an'i Napoleon izany.
Rehefa mijery ny sarin'i Welch miaraka amin'ireo mpitantana ny birao sy ireo mpinamana golf aho dia tsy afaka ny tsy hahatsapa fa mijery vondrona karmika aho. Ireo lehilahy ireo angamba ny jeneraly Marshal of France sy ny jeneraly First Empire. ”
Raha hijery ny raharaha momba ny miaramila sy ny raharaham-barotra hafa dia tsidiho ny:
Raharaha Reincarnation momba ny raharaham-barotra
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Misy fitoviana mitovy amin'ny maritrano mari-pahaizana arak'i Napoleon sy i Jack Welch.
Ny fiainana taloha talenta: Araka ny famaritan'ny fanadihadiana nataon'i Judith, dia samy mpitondra teraka i Napoleon sy i Welch. In Fiandohan'ny fanahy, noresahina fa ny mpitarika ny miaramila, rehefa mandroso ara-panahy izy ireo, tsy miankina amin'ny fikarakarana izay misy herisetra ary mifindra amin'ny anjara toerana fitantanana amin'ny raharaham-barotra na politika.
Fiovan'ny maha-olona avy amin'ny Fomba Fahafatesana ho an'ny hafa: Teratany frantsay i Napoleon, raha vao teraka tany Etazonia i Welch. Ny fahatakarana fa afaka manova ny fivavahana, ny zom-pirenena ary ny firaisam-poko avy amin'ny androm-piainany mankany amin'ny fiainana hafa isika dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo iainana milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny fifandirana sy ny ady dia miorina amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.